Nabaddoon Xasan Xuseen Walloore oo maanta lagu aasay Galkacyo. – Radio Daljir
Nabaddoon Xasan Xuseen Walloore oo maanta lagu aasay Galkacyo.
Galkacyo, Aug 08 – Alla ha u naxariistee waxaa maanta qabuuraha magaalada Galkacyo lagu aasay nabaddoon Xasan Xuseen Maxamed ‘Walloore’ oo xalay rag hubaysan ay toogasho ku dileen xilli uu ka soo baxay salaaddii Taraawiixda, dilkaasi oo ka dhacay xaafadda Garsoor.
Aaska marxuum Walloore, oo ka dhacay qabuuraha Galkacyo ayaa waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada, inta badan cuqaasha iyo nabaddoonnada gobolka iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan kuwaasi oo ku tukuday maydka saaladdii Jinaasada rabbina uga baryey naxariistii Eebbe.
Dilka alle ha u naxariistee nabaddoon Xasan Xuseen Maxamed ‘Walloore’ waxaa gaystay dhawr nin oo hubaysanaa kuwaasi oo baxsaday isla markii ay dilka fuliyeen, waxaana wali aan si rasmi ah loo aqoonsan ciddii falkaasi gaystay.
Ciidamada amniga ee magaalada Galkacyo ayaa wali wada baaritaanno ku saabsan baadi-goobidda raggii dilkaasi gaystay, hase yeesheen wali ma soo muuqan ififaalo lagu ogaaday eedaysanayaashii falkaasi gaystay.
Kuma cusba deegaannada Puntland gaar ahaanna magaalada Galkacyo dilka qof muctarif ah oo miisaan ku dhex-lahaa bulshada, kaddibna lawaayaba jiho dilkiisa gaystay.